हिन्दी सिनेमाका मेगास्टार बरिष्ठ कलाकार अमिताभ बच्चन र जया बच्चनको बैबाहिक जिवन ४८ औं बर्ष – Digital Khabar
हिन्दी सिनेमाका मेगास्टार बरिष्ठ कलाकार अमिताभ बच्चन र जया बच्चनको बैबाहिक जिवन ४८ औं बर्ष
By डिजिटल खबर Last updated Jun 3, 2021
२० जेठ, डिएनए । बलिउड मेगास्टार अमिताभ बच्चन र जया बच्चनको विवाह ४८ बर्ष पूरा भएको छ । अमिताभ बच्चन र जया बच्चनले जुन १, १९७३ मा विवाहित जीवनमा प्रवेश गरे र उनीहरूको विवाहको पछाडि पनि एउटा रोचक कथा छ । जून महिना हिन्दी अमिताभ बच्चन र जया बच्चनको विवाहको वार्षिकोत्सव हो । यस वर्ष, पौराणिक जोडीले विवाहित जोडीको रूपमा ४८ बर्ष पुरा गरेको छ ।
हु फिल्म उद्योग को शक्ति जोडी “पहिलो नजर मा प्रेम थियो । हो, यो ज्यायालाई “गुड्डी“ को सेटमा बिग बी देखे पछि एक अनौंठो आकर्षण थियो । जया बच्चनलाई अमिताभ बच्चनले सुपरस्टार हुनु भन्दा पहिले देखेका थिए । ’एक नजर’ को शूटिंगको क्रममा उनीहरुको प्रेममा परिणत भइन् र दुईजना पहिलो भेट भए ’गुड्डी’ को सेटमा ।
हाम्रो सम्बद्ध वेबसाइट डीएनएका अनुसार अमिताभसँगको पहिलो भेटको सम्झना गर्दै जयाले भनेकी थिइन, “मैले उसलाई ’गुड्डी’ को सेटमा परिचय गराएको थिएँ । म उनीबाट प्रभावित भएँ र उनी हरिवंश राई बच्चनको छोरो भएकोमा केही हदसम्म भए । मैले सोचे कि ऊ अरू भन्दा फरक छ, यद्यपि मैले यो भनेको थिए भने मानिसहरू ममाथि हाँसे । मैले आफ्ना भावनाहरू व्यक्त गरें र भने कि उहाँ लामो यात्रामा जाँदै हुनुहुन्छ । जे होस् मलाई थाहा थियो कि ऊ ठेठ स्टीरियोटाइप नायक होइन । म उनलाई चाँडै नै माया गर्न थालें ।
जया बच्चनसँग बिहे गरेको समयको सम्झना गर्दै अमिताभ बच्चनले आफ्नो ब्लगमा यस्तो लेखे, ’म एउटै समाजको कतचभभत वटै सडकमा भाडाको घरमा बस्दै थिएँ । विवाह हाम्रो बीचमा तय गरिएको थियो, केहि बढाइबढाइएको वा कुनै ठूलो उत्सवको साथमा थिएन । दुई थप परिवार । जंजीरको सफलताको साथ, हामी सबैको योजना छ कि यदि यो राम्रो भयो भने, हामी सबै – हाम्रा साथीहरूको समूह – छुट्टीमा लन्डन जान्छौ ं! ’
बिग बीले भने, ’बाबुआमाले अवसर खोजिरहेका थिए कि भनेर, बाबुजीको प्रश्न हाम्रो साथीहरू बेलायत जाँदा आएका थिए, उनीहरूको नाम खुल्यो, उसले भन्यो–जया पनि तिमीसंग जाँदैछौ? तपाईंहरू एक्लै हुनुहुन्छ । जसलाई मैले भनें – हो । तब बाबु जीले भने–यदि तपाई बिहे गरी जान चाहानु हुन्छ भने । ल । पण्डित र परिवारका सदस्यहरुलाई सूचित गरिएको थियो । अर्को दिन सबै तयार छ, रातमा उडान गर्दै, विवाह उडान हुनु अघि समाप्त भयो । म औपचारिक विवाहको तयारीहरु
गरिरहे म मेरो कारमा चढ्छु र मलबार हिलमा जान चाहन्छु जहाँ उसका साथीहरू बस्थे र जहाँ समारोह हुने थियो। मेरो ड्राईभर नागेशले मलाई धक्का दिएर मलाई विवाहमा लैजानु भनेर जोर दिए । परम्परागत घोडा को वैकल्पिक । म गएँ, केही घण्टामा विवाह भयो । भयो, श्री र श्रीमतीले घोषणा गर्यो । समाप्त! ’
विवाह पछि, जया बच्चन केही वर्ष थप काम गरे र त्यसपछि परिवारको हेरचाह गर्न फिल्महरू छोड्ने निर्णय गरे । यसका बारे कुरा गर्दै, अमिताभ बच्चनले पहिले भनेका थिए, ’हरेक विवाह चुनौतीपूर्ण हुन्छ र मेरो पनि फरक हुँदैन । मलाई जयाको बारेमा धेरै सराहनीय लाग्ने एउटा कुरा यो हो कि उनले फिल्मलाई होइन घरलाई प्राथमिकता दिए । यसमा कुनै अवरोध थिएन । यो उनको निर्णय थियो ।
जब जया बच्चनलाई अमिताभ बच्चनको प्रेम सम्बन्धको अफवाहको बारेमा सोधिएको थियो तब उनले भनिन्, ’मलाई मेरो श्रीमान्मा पूर्ण विश्वास छ र म यो उद्योगलाई चिन्छु । उसले गरेको कामको बारेमा मलाई कहिले पनि असुरक्षित महसुस भएन ।
जया बच्चनसँगको आफ्नो विवाहित जीवनको बखान गर्दै अमिताभ बच्चनले भनेका थिए, ’कुनै पनि विवाहमा मतभेद हुन्छन् जहाँ असहमति हुन्छ तर यो सबैको अंश हो । जया धेरै खुल्ला र धेरै सीधा छन् । कहिलेकाँही उनी सिधा सामान्य केटीबाट देखिन्छन्, तर यो के हुन्छ । यो उसको स्वभाव हो । मैले उसको गुण बदल्न कहिले कोशिश गरेको छैन र उसले मेरो अस्तित्वको गुणलाई बाधा पु¥याएको छैन । जब म एक्लै बस्न चाहान्छु, त्यसले मलाई एक्लै छोडिदिन्छ ।
हिन्दी सिनेमाका मेगास्टार बरिष्ठ कलाकार अमिताभ बच्चन र जया बच्चनको बैबाहिक जिवन ४८ औं बर्षको शुभ अवसरमा सुखद् दाम्पत्य जिवनको कामना गर्दछौं ।
डिजिटल खबर परिवार
ActorAmithab BacchanBollywoodbusinessCoronavirusCovid-19digital khabarJaya Bachhan
आज बिहिबार नेप्सेमा उच्च अंकको बृद्धि
अपि पावर कम्पनी लिमिटेडको आजबाट हकप्रद शेयर निष्काशन तथा बिक्री खुला
१२ करोड मागेको चर्चापछि अभिनेत्री करिना कपुर विवादमा